ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲကျင်းပ
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ − ၂၄
ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံ စားပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂၃)ရက် ည(၆)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ပထမတိုင်းရင်းသား နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်ကျောင်း၌ကျင်းပသည်။
ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲတွင် ခရစ္စမတ်ကျင်းပရေးကော်မတီ ဆရာတော်ဦးအမ်ယောနမှ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စကားပြောကြား ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ခရစ္စမတ်အကြို နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရာ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ တွေးခေါ်ယူဆမှုအမျိုးမျိုးဖြင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် သဘောထား ပြည့်ဝသော လူပုဂ္ဂိုလ်များစွာလိုအပ်လှပါကြောင်း၊ သဘောထားပြည့်ဝသောလူများသည် ခြားနားသောလူများနှင့် အတူနေထိုင် သည့်အခါ ဘုံတူညီချက်ကိုကြည့်ရှုပြီး အတူနေထိုင်တတ်ကြကြောင်း၊ ဘုံတူညီချက်ကိုရှေးရှုလျှက် နေထိုင်သောသူများကြောင့် မည်သို့ပင်ခြားနားမှုရှိနေပါစေ၊ အပြန်အလှန်လေးစားမှု၊ နားလည်မှုနှင့် တန်ဖိုးထားမှုစသည့် မေတ္တာဓါတ်များစုစည်းကာ နိုင်ငံ မြို့ရွာများ ငြိမ်းချမ်းသာယာဝပြောစေကြောင်း၊ ယခုကျင်းပသော ခရစ္စမတ်အကြို မိတ်ဆုံစားပွဲသည် ကွဲပြားခြားနားမှုများ အကြားဘုံတူညီချက်များကို ပုံဆောင်သောအခမ်းအနားဖြစ်သောကြောင့် ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း၊ ကွဲပြားခြားနားမှုများ အကြား၊ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသောဘာသာတရားများအကြား အပြန်အလှန်သဘောများပွားများလာစေရန်နှင့် မြန်မာပြည်ကြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချမ်းမြေ့သာယာ၍ အမုန်းတရားကင်းဝေးပြီး မေတ္တာဓါတ်ပွားများပါစေရန် ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းလုံးဆိုင်တို့က ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပေးအပ်ရာ ဆရာတော်တစ်ပါးမှလက်ခံရယူကာ၊ ပထမတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှသံစုံကြူးဧခြင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးတင်ဖေမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း၊ ဘာသာအသီးသီးများ ဖြစ်ကြသော ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ္စလာမ်ဘာသာတို့မှ ခရစ္စမတ်နှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားကြပြီး ပရိတ်သတ်များမှ ဓမ္မသီချင်း ကြူးဧခြင်းနှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံယူခြင်း၊ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ပေးအပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။
(၆၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ − ၂၃
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော (၆၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂၂)ရက် ည(၆)နာရီက တောင်ကြီးမြို့နယ် အေးသာယာရှိ အေးသာယာဂေါက်ကွင်း၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း အကျောပေး၊ အကျောမဲ့၊ အသင်းလိုက် အကျောမဲ့၊ အကျောပေးစသည်တို့ကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြပြီး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း အကျောမဲ့၊ အကျောပေး ဆုရရှိ သူများနှင့် အမျိုးသမီးဒိုင်းဆုရရှိသော တောင်ကြီး(က)အသင်း၊ အမျိုးသား အကျောပေးဒိုင်းဆုရရှိသော တာချီလိတ်အသင်း၊ အမျိုးသား အကျောမဲ့တံခွန်စိုက်ဒိုင်းဆုနှင့် ဆင့်ပွားဒိုင်းဆုရရှိသော အောင်ပန်း(က)အသင်း၊ ဧည့်သည်တော်ဆုရရှိသူများတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိုဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ဆုများအသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
(၆၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ အေးသာယာ ဂေါက်ကလပ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၆၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇ တံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၁၉)ရက် နံနက်(၇)နာရီက ဖွင့်ပွဲကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိုင်ငံတော်၌ တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး နှင့်ပညာရည်မြင့်မားရေးကို လူမှုရေးဦးတည်ချက်ထားရှိဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် အားကစားကဏ္ဍ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အားကစားမြှင့်တင်ခြင်းသည် နိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေသည်ကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဂေါက်သီးအားကစားသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားသော အားကစားနည်း တစ်ခုဖြစ်သလို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှု၊ စည်းကမ်းရှိမှု၊ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာထိန်းသိမ်းမှု၊ နည်းစနစ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပါ လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်နိုင်သည့် အားကစားသမားများရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် အားကစားကဏ္ဍများ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးကိုရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘောဇဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ၁၉၅၆ခုနှစ်မှစတင်ကာ lnter District Golf Tournament ဆိုသည့် ဖလားဖန်တီးပြီး တောင်ကြီးမြို့၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ လားရှိုးမြို့များတွင် နှစ်စဉ်အလှည့်ကျ ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ပြိုင်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းလုံးက အားကစား သမားများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် ကျိုင်းတုံကမ္ဘောဇဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲမှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား အသင်းပေါင်း(၆၁)သင်း၊ အမျိုးသမီး(၈)သင်းမှ စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည့်အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် (၆၂)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပရေးလိုအပ်သည်များကို ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသည့် ကမ္ဘောဇကုမ္ပဏီနာယကကြီးဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပရေးဆပ်ကော်မတီအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပြိုင်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းပေးကြသော အလှူရှင်များ အားလုံးနှင့် တောင်ကြီး အေးသာယာ ဂေါက်ကလပ်မှ တာဝန်ရှိသူများအားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘောဇ တံခွန်စိုက်ဖလားကြီးကို ဆွတ်ခူးနိုင်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းယှဉ်ပြိုင်ကြရန် ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ပြိုင်ပွဲကို SMOKE BALL ဖြင့် အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးခွန်ရဲထွေး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်တို့မှ ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများအား လိုက်လံနှုတ်ဆက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဟဲဟိုး ဒီဇင်ဘာ − ၂၃
ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးစုံညီပွဲတော် (Shan State Agriculture Symposium) ကို ဒီဇင်ဘာ(၂၂)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ကလောမြို့နယ် အင်းခေါင်းကျေးရွာ ဟဲဟိုးခြံ၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ(၂) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့် စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူတို့က အမှာစကားအသီးသီး ပြောကြားကြ သည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ယခုကျင်းပသော စိုက်ပျိုးရေးစုံညီ ပွဲတော်သည် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပွဲတော်ကြီးကို အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ တောင်သူ လယ်သမားအစုအဖွဲ့များ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု စနစ်ထွန်းကားစေ၍ လယ်ယာထုတ်ကုန်များ ရောင်းချရာတွင် သင့်တင့်မျှတသည့်စျေးနှုန်းနှင့် စျေးကွက်ရရှိစေရန် စိုက်ပျိုးရေး သုံးစက်ကိရိယာများအား တောင်သူများပိုမိုသိရှိနားလည်အသုံးပြုတတ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန် တောင်သူများလူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် စသည့်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း များနှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ထို့နောက် စိုက်ပျိုးရေးစုံညီပွဲတော်ကို စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး စိုက်ပျိုးရေးစုံညီပွဲတော်ရှိ စံပြစိုက်ခင်းများ၊ မွေးမြူရေးပြခန်းများအား ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ(၂) ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိူးရေးစုံညီပွဲတော် (Shan State Agriculture Symposium) ကျင်းပနိုင်ရေး ဒုတိယအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်တွင်ကျင်းပမည့် ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိူးရေး စုံညီပွဲတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိူးရေး စုံညီပွဲတော် ကျင်းပရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းရာ တက်ရောက်လာကြသည့် ကော်မတီဝင်များမှ အထွေထွေဆွေးနွေးကြကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲ တက်ရောက်ချီးမြှင့်
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁
တောင်ကြီးကတ်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက် ညနေ ၅ နာရီက တောင်ကြီးမြို့ စိန်ဂျိုးဇက်အောက်မေ့ဖွယ်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပသည်။
တောင်ကြီးကတ်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ၏ ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲတွင် ဘုန်းတော်ကြီး Fr. အီညားလျှိုမှ အဖွင့်ဆုတောင်းမေတ္တာဖြင့် အစပြုပြီး နယ်လှည့်ကတ်သလစ်လူငယ်အဖွဲ့မှ အဖွင့်ခရစ္စမတ် သီချင်းဖြင့် ကြိုဆို၍ ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘာစီးလျှိုအားသိုက်မှ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြား ကာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ခရစ္စမတ်အချိန်သမယတွင် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဘာစီးလျှိုအားသိုက်နှင့်တကွ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ သီလရှင်များ၊ တောင်ကြီး ကတ်သလစ်ဘာသာဝင်များအားလုံး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကို မေတ္တာဖြင့် ကြိုဆိုသည့်အတွက် အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ခရစ္စမတ်အချိန်သည် အားလုံး၏နှလုံးသားထဲတွင် မေတ္တာဆိုသည့် ဆုလာဒ်ကို ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အချင်းချင်းအပေါ်ထားသည့် မေတ္တာများကို နှလုံးသားနှင့်သယ်ဆောင်လာမည် ဆိုပါက အကောင်းဆုံးသော ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်မွန်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ခရစ္စမတ်အချိန်ကာလတွင် အားလုံး က မေတ္တာတရားဦးစားပေးပြီး မေတ္တာတရားနှင့် ဆက်နွယ်နေသော လူသားချင်းအပေါ်၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပေါ်တွင် ကောင်းသည့်စိတ်စေတနာထားခြင်းကို ဦးစားပေး၍ တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦးမေတ္တာစေတနာထား ခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းခြင်းဖြစ်ကာ အချင်းချင်းကောင်းသောစိတ်စေတနာမေတ္တာထားနိုင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ချစ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်ထားသော ကတ်သလစ် အသင်းတော်ကြီးကို များစွာဂုဏ်ယူမိပြီး သာသနာလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆထက်ထမ်းပိုးတိုးပြီး လုပ်ဆောင် ထမ်းရွက်နိုင်ရန် ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်တို့မှ ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်များကို ပေးအပ်ရာ ဘုန်းတော်ကြီး Fr. အီညားလျှိုမှ လက်ခံရယူပြီး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းတော်ကြီး Fr. ဖီဒဲလယ်တင်ဖေမှ စားသောက်ဖွယ်ရာများ အတွက် ကောင်းချီးတောင်းခံ၍ ခရစ္စမတ်မိတ်ဆုံစားပွဲ တည်ခင်းဧည့်ခံကြောင်း သိရသည်၊ အဆိုပါ မိတ်ဆုံစားပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်/ခရိုင်အဆင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ချီးမြှင့်ပေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့ )ကျင်းပ
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၆
ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့ ) ကို ဒီဇင်ဘာ (၁၆) ရက် နံနက် (၁၀)နာရီအချိန်က ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၄၀ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၁၅ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၅ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၉.၂၉ )% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် (ပထမနေ့) အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်က နှုတ်ခွန်းဆက် စကား ပြောကြားကာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ မိန့်ခွန်းပြောကြား၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ မိန့်ခွန်းကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ မှတ်တမ်းတင် ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။
ထို့နောက် အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်( ၁၅ )ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နမ့်စန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှ အတည်ပြု ကြောင်း ကြေညာ၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်( ၁၂ )ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း( ၁၅ ) ခုနှင့် အဆို(၁)ခုမေးမြန်းခြင်း ဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၇)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
TSDP အစီအစဉ်အရကျင်းပပြုလုပ်သော ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ပေါင်းစုံအားကစားပြိုင်ပွဲများဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ(၂၀)ရက် ညနေ့(၃)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြို့နယ်ပေါင်းစုံအားကစား ပြိုင်ပွဲတွင်ပါဝင်သည့် အားကစားနည်းများမှာ ကျောင်းပေါင်းစုံဘောလုံး၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ဖိတ်ခေါ်ဘော်လီဘော၊ မြန်မာ့သိုင်းပြိုင်ပွဲ၊ စက်ဘီး၊ ပြေးခုန်ပစ်၊ မီနီမာရသွန် ပြိုင်ပွဲစုစုပေါင်းအားကစားနည်း(၇)နည်း ပါဝင် ပါကြောင်း၊ အားကစားနည်း(၇)နည်းတွင် ဘော်လီဘောအားကစားနည်းတစ်ခုတည်းသာ အလွတ်တန်း ဖြစ်ပြီး ကျန်အားကစားနည်းများကို အသက်ကန့်သတ်ပြီးကျင်းပကြောင်း၊ အသက်(၁၆)နှစ်အောက် အားကစားနည်း(၃)နည်း(ဘောလုံး၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ မီနီမာရသွန်)နှင့် အသက်(၂၅)နှစ်အောက် အားကစား နည်း(၃)နည်း(စက်ဘီး၊ မြန်မာ့သိုင်း၊ ပြေးခုန်ပစ်) ပြိုင်ပွဲတို့ဖြစ်ကြောင်း အကြိမ်(၃၀)မြောက် အရှေ့တောင် အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကရရှိခဲ့သည့် ရွှေတံဆိပ်(၄)ခုတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားဖြစ်သည့် အားတီ(ခေါ်)ဖုန်းမြင့်ကျော်တစ်ဦးတည်းက ရွှေတံဆိပ်(၂)ခုရယူပေးခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အတွက်အားထားရသည့် ဂုဏ်ဆောင်အားကစားသမားကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အနေဖြင့် များစွာဂုဏ်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့နယ်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Township Sports Development (TSDP) အစီအစဉ်အရ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲသည် ယခုချိန်ထိ ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်လုံးတွင် (၃၅)ကြိမ်တိတိ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ကြောင်း၊ မြို့နယ်များမှ အုပ်ချုပ်သူ နည်းပြများအနေဖြင့် အားကစားသမားများ စည်းကမ်းရှိရှိနှင့် ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးအတွက် အနီးကပ် ကြီးကြပ်ပေးရန်နှင့် ပြိုင်ပွဲများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ကြမည့်ဒိုင်များအနေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော ပြိုင်ပွဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပေးကြရန်ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်လက်၍ ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၃၀) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘိလိယက်နှင့်စနူကာအားကစားနည်းမှ ရွှေတံဆိပ်(၂)ခုယူ ပေးခဲ့သော မောင်ဖုန်းမြင့်ကျော်အား ဂုဏ်ပြုဆုငွေကျပ်(၁၀)သိန်းကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းမှ ချီးမြင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အားကစားပြိုင်ပွဲများအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ငွေကျပ်သိန်းခြောက်ရာကို ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးမှ ချီးမြင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ပညာရေးကောလိပ်အား အားကစားပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံတို့မှ အသီးသီးချီးမြင့်ပေးကြသည်။
ထို့နောက် အမှတ်(၅)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများက Myanmar Fitness Danceအကဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေကြပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အေရိုးဗစ်ပြိုင်ပွဲတွင် Myanmar Fitness Dance ပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယ ဆုရရှိခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုအားကစားသမား များက သရုပ်ပြသကြကြောင်းသိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ
၂၀၁၉ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ကို ဒီဇင်ဘာ(၁၃)ရက် ညနေ(၆)နာရီက တောင်ကြီးမြို့ Classic Hall ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း၏ ပရဟိတစိတ်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ကြီးမှူးကျင်းပသော တောင်ကြီးအထူးဓမ္မသဘင်တွင် (၅)ရက်တိုင်တိုင် ညစဉ်မပျက်မကွက်ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းများ ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးခဲ့သည့်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စား ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်းကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးတရားပွဲ မြို့လုံးကျွတ် ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲတွင်လည်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးခဲ့သည့်အတွက် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း၊ အသင်းသူ၊ အသင်းသားများ၏ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို ဒီထက်မကပိုပြီး ကျစ်လစ်ခိုင်မာသည့် အင်အားတစ်ခုဖြစ်ရန်နှင့် အတွင်းရန်၊ အပြင်ရန်တို့ကိုလည်း စည်းလုံးညီညွှတ်မှုအင်အားဖြင့် အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြား သည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်ကြီးက အသင်း၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအား ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး၊ မိမိမြို့နယ်အတွင်း ဓါတ်ပုံပညာပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသူများနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံပညာအသင်းအား ပံ့ပိုးကူညီသူများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်းမှ လပတ်ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်၏ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဖိတ်ခေါ်ပြိုင်ပွဲ ဆုရရှိသူများနှင့် အကောင်းဆုံးဆု ရရှိသူများတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများမှ ဆုချီးမြှင့် ပေးကြသည်။
ထို့နောက် ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသူများကိုယ်စား ၂၀၁၉ခုနှစ် အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံပညာရှင်ဆုရရှိသူ ကျော်နိုင်လင်း (လရိပ်ပြာ)မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် ဓါတ်ပုံအသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်ဦးမှ နိဂုံးချုပ်စကား ပြောကြားကြောင်းသိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E Mr.Ronen Gilor အဖွဲ့နှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံ
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၂၀
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဦးစိုင်းလုံကျော်၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်စံလွင်၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာ(၂၀)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီ ကတောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ (call)ခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး H.E Mr. Ronen Gilor ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် လက်ခံတွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။
ထို့သိုတွေ့ဆုံရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ယခုလိုသံအမတ်ကြီးအဖွဲ့ ကိုကြိုဆိုပါကြောင်းနှင့် လာရောက်ကူညီမှုပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မိတ်ဆက်ပေး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားဆွေးနွေးသွားသည်။
ဆက်လက်၍ အစ္စရေးသံအမတ်ကြီး H.E Mr.Ronen Gilor မှ ပင်ဖြစ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များရှိပါ ကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များ၊ ရေသန့်လုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအပြင် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကဆွေးနွေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အစ္စရေးနိုင်ငံတော်မှ လာရောက်ပံ့ပိုးကူညီရန် လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည် ပြည်နယ်များထဲတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးနေပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်သည် ရာသီဥတုရော ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားပါ ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် သီးနှံစိုက်ပျိုး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
ထို့နောက် ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးမှဆွေးနွေးရာ ယခုလိုအဆွေတော်နှင့် တွေ့ဆုံရ သည်မှာဝမ်းသာပါကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် သရက်သီးကို အများဆုံးစိုက်ပျိုးပြီး နည်းပညာများ လိုအပ်နေပါသေးကြောင်း ဆွေးနွေးကာ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်စံလွင်မှ အဆွေတော်နှင့်တွေ့ဆုံရသည်မှာ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ အဆွေတော်၏သတင်းကို မိမိ၏စီးပွားရေးမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှ သိရှိထားပါကြောင်း၊ မိမိတို့ဒေသတွင် ထောပတ်ကို အဓိကစိုက်ပျိုးပါကြောင်း၊ ထောပတ်ကိုနောက်ထပ် အပင်(၅၀၀၀)စိုက်ပျိုးနေပြီး ဒေသထွက်မျိုးကို စမ်းသပ် စိုက်ပျိုးနေကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။
၎င်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဆွေတော်အဖွဲ့အား ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြကြောင်းသိရသည်။
ဟဲဟိုး ဒီဇင်ဘာ - ၁၁
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ဟဲဟိုးမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက ဟဲဟိုးမြို့၊ မြို့လယ်ဓမ္မာရုံ၌ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ သွားရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒေသခံပြည်သူများ၏လိုအပ်ချက်များဖြစ်သော လမ်းကိစ္စရပ်များ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး ကိစ္စရပ်များ၊ ပြည်တွင်းအခွန်ကိစ္စရပ်များ၊ ကျန်းမာရေး၊တိုင်းရင်းဆေး၊ မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးနှင့် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန တို့မှ လုပ်ငန်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်ပေးကြပြီး၊ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့သော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားများ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများ၊ လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇) များ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့က ဒေသခံပြည်သူများအား ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဟဲဟိုးမြို့ရှိ လေသာတောင်ဘုရားစေတီ သို့ တက်ရောက်ဖူးမျှော်ကြည်ညိုကြပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အလှူငွေကျပ် သိန်း(၂၀)ကို ပေးအပ် လှူဒါန်းရာ အဆိုပါဘုရားဂေါပကမှ လက်ခံရယူပြီးနောက် အင်းခေါင်းဆည်(ဟဲဟိုး)ရှိ စိုက်ပျိုးရေးခြံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးဓာတ်အားသုံးစွဲသူ (၅၀%)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် တောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ်ဓနု အမျိုးသားနေ့ နောင်ချိုမြို့၌ကျင်းပ
ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ငွေရည်ပုလဲဘိလပ်မြေစက်ရုံ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု